အမျိုးသမီးများ၏အွန်လိုင်းနမူနာတစ်ခုတွင်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်ယင်း၏ဆက်စပ်မှုကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အညွှန်းများ (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
တစ်ဦးအမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာ (2014) တွင် Hypersexuality နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်၏ self-နားဆင်နိုင်ပါတယ်ညွှန်းကိန်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ9Jun 2014 ၏ဂျာနယ်
Doi: 10.1111 / jsm.12602
Verena Klein Dipl. -psyche ။1, *,
မာတင် Rettenberger ပါရဂူဘွဲ့1,2 နှင့်
Briken MD Peer1
Hypersexual အပြုအမူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးအငြင်းပွားစရာအများကြီးအငြင်းပွားပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်သာနည်းနည်းအာရုံစိုက်မှုအမျိုးသမီးတွေအတွက် hypersexual အပြုအမူမှပေးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, ယနေ့အထိအမျိုးသမီး hypersexuality များ၏အမူအကျင့်ပုံစံများအပေါ်ကန့်သတ်အသိပညာလည်းမရှိ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်ပိုင်းအပြုအမူပုံစံများအမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာအတွက် hypersexuality ၏ Self-အစီရင်ခံညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဆနျးစစျဖို့ပဲ။ ဒုတိယရည်ရွယ်ချက်မှာ hypersexuality နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
စုစုပေါင်း 988 အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများနှင့် hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့ဆနျးစစျဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဆက်စပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူနှင့် hypersexuality အကြားဆက်ဆံရေးကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
hypersexual အပြုအမူ၏အညွှန်းကိန်းဟာ Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI) ဖြင့်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လက်ရှိနှင့်ပစ္စုပ္ပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူစကေး (SSSS) ရှာအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Sensation သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
မြင့်မားသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအမျိုးသမီး hypersexual အပြုအမူတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဘွဲ့နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် HBI စုစုပေါင်းရမှတ်အပြုသဘောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို hypersexual အမျိုးသမီးတွေပုံမှန်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပို passive ပုံစံများအတွက်စေ့စပ်ဖြစ်ကြောင်းယခင်သုတေသန၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့မပေးပါဘူး။ အဲဒီအစားမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို hypersexuality ပိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခံရဖို့ပုံရသည်။ hypersexual အပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အလားအလာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်ကုထုံးကြားဝင်ဤတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Klein V ကို, Rettenberger M ကများနှင့် Briken P. ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံ hypersexuality ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာ၎င်း၏ဆက်စပ်။ J ကိုလိင် Med **; **: ** - ** ။
အမြင့် Porn အသုံးပြုခြင်းမှလင့်ခ်လုပ်ထားသောအမျိုးသမီးများအတွက် Hypersexuality
Bahar Gholipour မှ ၀ န်ထမ်းစာရေးဆရာ ဇူလိုင်လ 07, 2014 05:49 pm တွင် ET
လိင်မှုကိစ္စမကြာခဏလုပ်သောကြောင့် ၄ င်းတို့ကိုပြhypနာများဖြစ်စေနိုင်သည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ hypersexual” ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသော - စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကဲ့သို့သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများထက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရသုတေသနအသစ်အရသိရသည်။
Hypersexuality သည်စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်များနှင့်လိင်ဆေးပညာသုတေသီများအကြားတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အမှန်တကယ်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်မဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိသည့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအငြင်းပွားဖွယ်အပေါ်အမြင်များဖြစ်ကြသည် အမျိုးသမီးတွေအတွက် hypersexualityများသောအားဖြင့် hypersexuality အများစုလေ့လာမှုများအတွက်လျစ်လျူရှုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။
လေ့လာမှုအသစ်၏သုတေသီများကအမျိုးသမီး hypersexuality နှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ္myာရီများစွာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ [Hot Stuff? 10 ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင် fixation]
hypersexual မိန်းမများအမှန်တကယ်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ကူးရရှိရန်သုတေသီများသည်ဂျာမနီရှိအမျိုးသမီး ၁၀၀၀ နီးပါးကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီးအများစုမှာကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသားများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုမည်မျှတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ခြင်းသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုခဲ့သနည်း၊
အဆိုပါသုတေသီများလည်းလို့ခေါ်တဲ့မေးခွန်းလွှာသုံးပြီးသင်တန်းသားများအတွက် hypersexual အပြုအမူအကဲဖြတ် Hypersexual အပြုအမူ Inventory၎င်းတွင်လူတစ် ဦး သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိင်ကိုမည်မျှမကြာခဏအသုံးပြုသည်၊ လိင်လှုပ်ရှားမှု၌ပါ ၀ င်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ၏ထိန်းချုပ်မှုအပြင်ဘက်တွင်ရှိခြင်းနှင့်ဤလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုသည်လူတစ် ဦး ၏အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်း ၁၉ ခုပါ ၀ င်သည်။ ယခင်စစ်တမ်းများအရလူတစ် ဦး သည်ကုထုံးလိုအပ်နိုင်ကြောင်းဤမေးခွန်းလွှာကိုမြင့်မားစွာရှာဖွေခြင်းကအကြံပြုနိုင်သည်။ လေ့လာမှုအသစ်တွင်ပါဝင်သူ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်မေးခွန်းများအပေါ်သူတို့၏ရမှတ်များအပေါ် အခြေခံ၍ hypersexual အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။
အဆိုပါရလဒ်များပိုပြီးမကြာခဏအမျိုးသမီးများကိုသူတို့ hypersexuality မေးခွန်းလွှာအပေါ်မြင့်မားသောဂိုးသွင်းဖို့ခဲ့ကြသည်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်, porn masturbated သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦးကမြင့်မားတဲ့အရေအတွက်ကလည်းအညီ, မြင့်သော hypersexuality ရမှတ်များနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပါသည် လေ့လာချက်ဇွန်လအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည့်။
သုတေသီများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်လွှမ်းမိုးရန် hypersexual မိန်းမများသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုအသုံးပြုသည်ဟူသောယူဆချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီးလက်ရှိလေ့လာမှုမှရလဒ်များသည်ယခင်သုတေသန၏စိတ်ကူးတွင်လိင် hypersexual အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုပါ ၀ င်မှုရှိသည်ဟုမထောက်ခံကြပါ လေ့လာမှုမှာရေးသားခဲ့သည်။
အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မိန်းမများတွင် hypersexual အပြုအမူသည်မည်မျှတွေ့ရသည်ကိုမရှင်းလင်းပါ။ လေ့လာမှုအများစုသည်အမျိုးသားများအပေါ်အဓိကထားသောကြောင့်ဖြစ်စဉ်သည်ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုထင်မြင်ယူဆရကြောင်းသုတေသီများကပြောကြားခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး hypersexuality နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတမရှိခြင်း၏အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏ဆန္ဒများကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လိင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုဝန်ခံခြင်းကိုတားဆီးသောယဉ်ကျေးမှုဘက်လိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုအသစ်တွင်မပါ ၀ င်သောကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှလက်ထောက်ပါမောက္ခနှင့်သုတေသနစိတ်ပညာရှင် Rory Reid က“ ကိစ္စရပ်တော်တော်များများ၌အမျိုးသားများသည်မိန်းမများနှင့်လိင်ကွဲဆက်ဆံခြင်းကိုပိုမိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုအပြုအမူများပြုပါကအမျိုးသမီးများသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသားများအားအမျိုးသားများအဖြစ်အမျိုးသားများအဖြစ်လူသိများလေ့ရှိသော်လည်းယောက်ျားများကိုမူအမျိုးသားများအဖြစ်သာသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်ဟု Reid မှပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမူအကျင့်ပုံစံများ hypersexual အမျိုးသမီးတွေမှာတွေ့ရတဲ့လေ့လာမှုအသစ်ယခင်က hypersexual အမျိုးသားများတွင်ဖော်ထုတ်အပြုအမူတွေနှင့်ဆင်တူနေသည်။ ဤရွေ့ကားအပြုအမူတွေပါဝင်သည် ညစ်ညမ်းမှီခို, အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ကရာ။
ရီးဒ်ကတွေ့ရှိချက်များမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူကိုယ်တိုင်လေ့လာမှုများတွင်သူသည် hypersexual မိန်းမများအားအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါကွဲပြားမှုများထက်ပိုမိုတူညီကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
သို့သော်လေ့လာမှုအသစ် hypersexual မိန်းမတို့သည်သင်တန်းသားများ၏ကျန်ခဲ့ကြသည်ထက်ရိုးရိုးဖြစ်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဆနျ့ကငျြ, hypersexual ယောက်ျားလိင်ကွဲဖြစ်လေ့, Reid က Live Science ကိုပြောသည်။
စွဲလမ်းအချို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆင်တူ, - - သို့မဟုတ်ကလူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ့အပြောင်းအလဲ hypersexual အပြုအမူတစ်ခုရောဂါရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိခဲ့သည်။ ထို Diagnostic ၏ပဉ္စမ (နှင့်လတ်တလော) ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-5) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်များတွင်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံးအပါအဝငျဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် “ လိင်စွဲလမ်းမှု” hypersexuality တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ပြသနိုင်ဖို့အတွက်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားမရှိဟုတစ်ဦးရောဂါအဖြစ်။
လိင်မှုဘယ်လောက်များများရှိသလဲဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှု (သို့) အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ မှာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့အခါမှာ hypersexual အပြုအမူဟာလူတချို့အတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားပါတယ်။ အလုပ်၏အရှုံး.
“ [သုတေသီများ] သည်အခြားသူများအားသူတို့၏ပုံမှန်နှင့် (ပုံမှန်မဟုတ်သော) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုမှားယွင်းစွာမဖော်ပြဘဲကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သူများကိုဖော်ထုတ်ရန်မှာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။